Ikhono ukuxhumana nabantu - obalulekile umsebenzi womuntu, inqubo eyinkimbinkimbi ukuhlonywa nokuthuthukisa ubudlelwane phakathi kwabantu.
Kukho konke ukuphila sisebenzelana izigaba ezahlukene abantu: ngobudala, isikhundla emphakathini, emakhonweni. Ngenxa ukuxhumana nathi abelane ngolwazi, sithola okuhlangenwe nakho okulusizo, afunde ukulalela futhi kuqondwe abanye.
It kuvela ukuthi ikhono lokukhulumisana nabantu - lena isayensi okukhulu. Kuye ngubani esibhekana nazo, kudingeka sifunde ikhono elihle lokukhulumisana nabanye etimeni letehlukene. Ngokwesibonelo, izingxoxo e kubhizinisi womhlangano kuyoba kwehluke kakhulu kulokho okungekhona ukukhuluma nomndeni kanye nabathandekayo - okuqukethwe, umbala ngokomzwelo, isikhathi.
Ikhono ukuxhumana nabantu kubaluleke kakhulu emphakathini wanamuhla. Nobe nguliphi licembu kukhona ezahlukene uhlamvu nezinkolelo womuntu ngamunye kanye kubalulekile ukuthi ukukhulumisana eBhayibhelini zinomqondo omuhle futhi kuletha injabulo kanye nenjabulo. Kusukela lapho sizalwa futhi kukho konke ukuphila ihlala ukwabelana kwethu ngemininingwane nabanye. Amagama njalo ukusiza ukwethula ulwazi, ukuchaza imicabango. Kodwa okubaluleke kakhulu, ukuba inkulumo umngane wethu ethandeka futhi kwaba sobala.
Okuningi engxoxweni kuncike hlobo of uhlamvu. Extroverts abantu ubungane. Bathi ukuxoxa konke futhi sizimisele ukuxoxa lwazi nabanye abantu. Ngezinye izikhathi isikhathi kanye extroverts eyisicefe, kodwa uma wazi ukuthi ukulalela, niyakuba uwine uzwela ngomuntu onjalo. Odokotela bengqondo ukweluleka: ukulalela "yisikhulumi" kuyadingeka kuphela kancane ikhanda lakho ngakwesokudla.
Introverts - ke undecideds futhi kunzima ngempela ukuxoxa nabo. Bona demure futhi ngempela avaliwe, ngokunqoba yabo kanye nakho becasha esinguye ekujuleni kwethu. Gcina ingxoxo introverts kunzima ngokwanele, kodwa ukuze ufunde ngempela ngempela.
Ngezinye izikhathi siba ukuxhumana nabantu, ukukhuluma esixhumana abathandanga. Indlela yokubhekana abantu ezingemnandi, nalabo abakubangelayo imizwelo engakhi ngisho ecasulayo? Imane ukugwema lezo ezivame nonjalo. Nokho, ngenxa yokuthi lodaba ivame ukuhlotshaniswa imisebenzi okhokhelwayo. Ngakho-ke, iseluleko esibaluleke kakhulu - ukuzama ngikhulume ngomoya omnene futhi ukuzibamba, imizwa kungukuthi egijima. Njalo sizame ukuthola inkhulumomphendvulwano enjalo, futhi ezicini ezinhle kakhulu interlocutors. amacebo yakho futhi isimo sengqondo esiqondile nakanjani kuholele emphumeleni omuhle.
Uma kudingeka nixoxe ibhizinisi, futhi akunakugwemeka, ithoni yakho kufanele kube isimo esihleliwe futhi zilungile. Isihloko izinkulumo kufanele ukubhekana nezikhathi okhokhelwayo. Ikhanga uzakwabo ku "wena", imibuzo ecacile nezimpendulo ukukusiza ukusebenza emkhathini. Into esemqoka ukuba ukhumbule ukuthi umuntu ezingemnandi - nje umsebenzi emsebenzini, okuyinto has iphuzu lalo umbono futhi awuphoqelekile ukuthi uthanda wena.
Kukhona ingxoxo ezingemnandi nesihlobo. ukuxhumana okunjalo ngokuvamile akunakugwenywa. Zama uma kungenzeka ukuziba ucingo, noma kangcono nokho ukuhumusha ibe ihlaya engathandeki. Ukuzola futhi poise nezihlobo ezingemnandi iyoba ikhadi lakho trump.
Kanjani ukuyeka ukuxoxa nomuntu
Ngokuvamile sidinga okuhlangenwe nakho okuhle ngisho ezimbi, ngoba yileyo ndlela esikwazi ukufunda. Kodwa ngezinye izikhathi kuyadingeka ukuze ayeke ukuxoxa nomuntu. Ngaphambi kokuba unqume ukwenza kanjalo, cabanga ukuthi ukwenza kanjalo. Mhlawumbe kufanele sizinike isikhathi esifushane ngaphandle, futhi ungena wena izizathu isenzo esinjalo. Akubalulekile ukuyeka ukukhulumisana ngokushesha, bese ezisola.
Ikhono ukuxhumana nabantu iza nakho. Ungalokothi sekwephuzile lokhu ngakho bangakwazi sifunde ukuqonda futhi uyayihlonipha imicabango lomuntu bese imizwa. Iba avuleke kakhudlwana futhi nobudlelwano.